Farmaajo oo kireystay shirkad u fududeysa booqashada Mareykanka | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo kireystay shirkad u fududeysa booqashada Mareykanka
Shirkadda ayaa waxaa fadhigeedu yahay gobolka New Jersey, waxayna lacag badan ka qaadatey dowladda Soomaaliya si ay uga iibisiyo Farmaajo Congress-ka Mareykanka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha uu waqtiga ka dhamaadey ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa dhaqaale badan ku bixinaya qaabkii uu ku tagi lahaa Mareykanka, waxaana uu kireysay shirkad u fududeysa booqashadiisa.
Shirkaddan fadhigeedu yahay gobolka New Jersey, oo lagu magacaabo LFA Holdings ayaa waxaa heshiiska la galay Safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka Cali Shariif Axmed, sida ku cad warqadda heshiis oo ku saxiixan Taariikh March 22, 2021.
Sida ku xusan heshiiska, Shirkadda ayaa Todobaadkii ku qaadaneysa $150,000, waxaana shaqooyinka ay qabaneyso kamid ah inay u fududeyso Farmaajo booqasho uu ku tagayo Mareykanka iyo la kulanka Xildhibaanno katirsan Congress-ka dalkaasi.
Heshiiskan ayaa lala galay Shirkadda LFA Holdings saddex maalin kadib markii Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka Antony Blinken uu soo saarey qoraal uu ku baaqey in doorashadda Soomaaliya si deg deg ah loo qabto, kana soo horjeestay muddo-kordhinta Madaxweynaha.
Inuu booqdo Mareykanka waxaa ku qasabaya Farmaajo diidmada lagala horyimid muddo-kordhintiisa, oo Mareykanka ugu horeeyo, wuxuuna doonayaa inuu Joe Biden kasoo iibiyo siyaasadiisa.
Farmaajo ayaa sida ay wararku sheegayaan lacag badan sidan oo kale ku bixiyay safarkii uu dhawaan ku tagey dalka Congo iyo la kulanka Madaxweyne Felix Tshisekedi oo uu ka raadiyay taageeradda Midowga Afrika ee muddo-kordhintiisa sharci darrada ah.
Bishii Sep 2019, booqashadii ugu horeysay Farmaajo uu ku tagey Washington wuxuu u hurey dhalashadiisa Mareykanka si uu khudbad uga jeediyo Shirka QM, maadaama aan ogoleyn sharciga Mareykanka in qof haystay baasaboorka dalkaasi in loo sameeyo soo dhaweyn hab-maamuus Madaxweyne.